စိုက်ပျိုးရေးရေမှုံရေမွှားစက် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စိုက်ပျိုးရေးရေမှုံရေမွှားစက် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ဈေးကွက်အသီး၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က signi ခဲ့သည်ﬁမီးခိုးအဘို့ သာ. ကြီးမြတ် cantly-ရေ-ကုသ(1:500,အသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့်)ထိန်းချုပ်မှုသည်ထက်ခရမ်းချဉ်သီးအပင်.Butenolide နှင့်မီးခိုး၏အောက်ပိုင်းအာရုံစူးစိုက်မှု-ရေ(1:2000,volurne အားဖြင့်)ပိုပြီးအသီးလြှော့,ဒါပေမယ့် signi မဟုတ်ခဲ့ﬁထိန်းချုပ်မှုကနေမတူညီတဲ့ cantly.volumef ခုနှစ်တွင်အသီး၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကရရှိ,မီးခိုးကုသ signi မﬁcantly ပြောင်းလဲမှုအရွယ်အစား,အလေးချိန်,နှင့်အာဟာရဖွဲ့စည်းမှု(အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်, [3-carotene,ခရမ်းချဉ်သီး,နှင့်စုစုပေါင်းတွင်ပျော်ဝင်နေသောစိုင်အခဲ)အသီး၏.မီးခိုးစပါးရိတ်ရာကာလညွှန်းကိန်း-ရေနှင့်butenolide-signi ကုသစက်ရုံများﬁcantly တိုးတက်,ခရမ်းချဉ်သီးစိုက်ပျိုးမီးခိုးနည်းပညာ၏ဖြစ်နိုင်သောအသုံးပြုမှုကိုအကြံပြု.(Manoj, G.Kulkarni,Glendon: D.Ascough,နှင့် Johannes ဗန် Staden1 2008)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/agriculture-spray-machine.html
စိုက်ပျိုးရေးရေမှုံရေမွှားစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် စိုက်ပျိုးရေးရေမှုံရေမွှားစက် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 81,963 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com